gasy1zay - 24/03/2020 03:27
Tsy azon'i RBNIR mintsy fa ny lalàna hoan'ny naterabaovao dia ny lalàn'ny FM fa tsy lalàn'i Mosesy, izay no antony hoe mila tarihin'ny FM ianao fa tsy vitanao ny manantanteraka ny lalàn'i Mosesy araky ny efa nambara teto ireny
rehefa tarihin'ny FM ianao RBNIR dia ho vitanao ny miaina ny fahamasinana araky ny voalazan'i Romana 8:3 -4 ( traduction Parole vivante)
Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible – à condition de ne plus mener notre existence d’après les normes usuelles, suivant les impulsions de l’homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l’Esprit de Dieu.
Azonao ve RBNIR ?
Tsy vitan'ny olona ny nanaraka ny lalàna fa nanjaka tao aminy ny ota, fa rehefa maty Kristy dia rava ny herin'ny fahotana ka afaka mandray ny FM isika, ary afaka feno ny FM, ary afaka tarihin'ny FM, ary afaka tonga zanak'Andriamanitra, ary voamarina eo anatrehan'Andriamanitra ianao
Si, par contre, le Christ vit en vous (par son Esprit), vous êtes devenus des hommes nouveaux, votre corps a beau rester mortel à cause du péché, votre être intérieur est vivifié par l’Esprit parce que vous avez été déclarés justes.
rehefa tarihin'ny FM ianao RBNIR dia voalaza vous avez été déclarés justes
tsy misy resaka hoe manaja andro sabata, natao batisa tanaty renirano, nandoa 1/10 no déclaré juste
fa izay tarihin'ny FM...
mazava be angamba ireo soratra masina ireo ka tsy aleo ve mba hangataka ny fitarihan'ny FM @ zay sao dia diso hazakazaka ianao RBNIR manaraka fanenkena taloha efa tsy manankery intsony?
RBNIR - 24/03/2020 06:14
Dia mbola averiko ihany ary ilay izy ary ampiako indray koa...
Na fitiavana, na tahotra, na ny FM na koa mbola antony hafa ..... no mitaona anao hitandriana ny lalàn'Andriamanitra dia mpitandrina ny lalàn'Andriamanitra ianao izay fa aza miatsaravelatsihy eo imason'ny olona sy manohy ny mandainga eo imason'ny FM.....
rhaj0 - 24/03/2020 16:21
Ho an'izay liam-baovao..
Ny any aty Ottawa izao dia hoe:
- Ontario's Ministry of Health confirmed 24 people have now tested positive for COVID-19 in Ottawa
- Ottawa's medical officer of health says computer models suggest 4,000 people in Ottawa have COVID-19, many without knowing it.
Satria raha tena atao test ny olona an-tapitrisany, dia hivoaka ny tena isa hoe 4,000. Fa saingy indrisy, ny voa-tester dia vitsy, ary dia 24 no isa ofisialy.
Fa efa kopy ny aty, ary dia efa saika confinement izao.
gasy1zay - 24/03/2020 19:39
tenin'ny baiboly io ka raha mbola miaina anaty tahotra ianao RBNIR dia manontania tena aloha hoe inona ny Fanahy miasa ao anatinao?
rhaj0 - 24/03/2020 22:09
Ampiana kely ho an'izay liam-baovao
Ny antsasaky ny voan'ny Coronavirus tao Korea Atsimo dia noho ny OLONA IRAY,izay tsy nitandrina rehefa narary fa nilaozany ... nandeha niangona, dia nizara ity Coronavirus t@ Kristiana namany.
RBNIR - 25/03/2020 11:33
dia ahoana izany rhaj0 dia sanatria ho isan'ireo 4000 v izany izao ianao io sa?
rhaj0 - 25/03/2020 12:56
Izay ny olana lehibe @ izy ity. Rahefa tsy voatsapa (test) dia tsisy mahafantatra na voany na tsia.. ao anatin'ny 14 andro eo, satria mety velona ao @ vatana 14 andro fa tsy mbola mamely ilay virus. Ny loza dia sady efa miparitaka mifindrafindra izay tsy izy koa ilay izy @ io.
Ny olana lehibe manaraka, dia raha miara-mihetsika daholo ireo 4.000 ireo, dia ho fefika ny hopitaly. Ary mety ny dokotera akory azany no isan'ny marary.
Ka tena tsy sangisangy io, fa rahefa hozy ny torolalana hoe, misaratsaraha 2 metatra, dia izay no atao.
Jereo tsara fa natao ny fanadihadiana (enquete) ary dia hita tsara mihintsy fa ilay kristiana nivavaka tatsy @ ilay sekta koreana no rangory fototry ny niparitahan'ny Coronavirus t@ antsasak'ireo 9.217 Koreana tatsimo voan'ilay Coronavirus.
Fa dia averiko indray, fa dia tena AFOHIZO ary ARIO any ilay resaka ao @ Hebreo hoe, aza mahafoy ny fiarahantsika miangona,...
ngo dia mihetsika indray ny hadalan'i FFKM, dia hoe, ndao hanao fotoam-pivavahana fangatahana miaraka @ izao krizy izao. Na hoe tsy maintsy miangona mivavaka rahefa Paka.
RBNIR - 25/03/2020 14:42
izao ary, raha misy v kristiana ankehitriny tsy misy voan'io corona virus io mihitsy hino v ianao fa i Jesosy marina no ao ambadik'izireo???
rhaj0 - 25/03/2020 16:57
Toa mbo takatr'i RBNIR ihany anefa fa ny sery sy kohaka dia tena tsisy idiran'i JEsosy... Dia inona izany io fanontanian-dRBNIR io?
Mba takatrao ve k'lou ry RBNIR ny fandehan'io Cornavirus io?
Mba hainao ve ny fandehan'ny virus @ ankapobeny?
Raha hainao ny virus-na gripa, sery sy kohaka, dia ho hainao koa ny @ Coronavirus.
Dia TSY ho savisavihanao dia afahanao baraka @ izany Coronavirus izany I JEsosy.
Henatra ho anao ry RBNIR.
Tena mba mahalala menatra fa efa lehilahilehibe eee
ilay olona karazan'ny toa anao io mihintsy ry RBNIR izao no mila arahina maso, fa tena tsy misaina ary lasa manaonao foana, ka mety mampitombo ny loza @ izao krizy Coronavirus izao.
RBNIR - 26/03/2020 06:36
aiza ary izany ry rhaj0 mamaly anao ange aho ary tsy valianao ilay fanontaniako e...
ny olana aminao mantsy ankehitriny dia "tsy mety mino" ianao satria mbola tsy nahita porofo mivaingana hoy ianao...
ka amin'izao fotoana izao (tsy voatery hoe izahay ity resahiko ity an!) raha misy olona tsy voan'io virus mihitsy ny mpikambana ao aminy ka hijoro vavolombelona eo anatrehanao izy avy eo hoe mahagaga fa tao aminay tsy nisy voa na 1 aza(satria raha araka ny fanazavanao dia tokony hoe mahagaga tokoa raha misy izany y satria mifindra tahaka ny sery ilay izy)
Hino azy v ianao hoy aho?????
rhaj0 - 26/03/2020 13:23
Mazava ho azy fa TSY mino anizany JEsosisosinao miaro @ Coronavirus sy sery ary kohaka izany aho.
Tsy efa porofo bolongana be ary valin-teny ho an'ny fanontaniana-adalanao ve ry RBNIR ireo Kristiana tao @ sekta tany Korea Atsimo, izay rangory fototry afo, ka nahavoa ny COronavirus ny antsasaky ny Koreana miisa 5.000?
Sa tsy tao anaty Baiboly ireto Kristiana-adala-nanaparitaka-virus ireto dia TSY mety miditra ny lohan-dry RBNIR mihintsy ilay resaka?
Efa voalaza eraky ny haino aman-jery aty, fa rehefa nozohina, dia OLONA IRAY tao @ ilay sekta no efa narary, nefa dia mbola nandeha niangona hidera an'izao Jeosy izao HONO. Efa nifona ilay lehiben'ilay sekta ary efa nampijanona ny fanatikany tsy hiangonangona intsony.
FAntaro fa raha aty Kanada ianao, ka mahazo torolalana hoe confinement, nefa tsy manaraka, ohatra hoe, avy any Italie ianao ka nahita Papa dia hoe, tena efa nivavabavaka be, ary dia dangidangy ao, dia mino be fa mitohy ny fiarovan'i Jesosy anao, dia raha mbola mizesta mivoaka ny trano, indrindra koa raha hoe mbola miangonangona any izany, dia fantaro fa dia hahazo lamandy efa ho 750.000$ ary mety higadra h@ 6-mbolana.
Ka tena aoka izay kely ity hadalanareo ity ry RBNIR. Efa krizy be izao ny erak'izao tontolo izao, fa tsy fotoanan'ny rediredy intsony izao.
RBNIR - 26/03/2020 13:32
Aleo tsy iadiankevitra fa avadiko kely indray ary e,
raha ohatra v ka misy kristiana iray mametratanana amin'ny olona iray voan'ny corona virus dia sitrana izy hino v ianao fa ilay hery tao amin'i Jesosy fahiny ihany no hery ao aminy ankehitriny?
gasy1zay - 26/03/2020 14:13
RBNIR > tadidinao ve ny tantaran'ilay mpanankarena sy lazarosy? rehefa tonga tao @ ny fiainantsyhita ilay mpanakarena ka nijaly dia niangavy hoe mba handefaso olona any @ rahalahiny hampitandrina azy ireo hoe mila miova izy raha tsy te hiafara ohatra azy. Dia hoy Abrahama hoe rehefa tsy mino an'i Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy hino na misy ny mitsangana @ maty aza.
Efa nandalo Mosesy, efa nandalo ny mpaminany, ary efa nitsangana t@ maty JK fa misy olona tsy mbola mino, na hanao fahagagana toy inona aza JK dia hisy foana ny tsy hino fa hitady explication mampetipety ny sainy. Mila fo vonona handray ny tenin'Andriamanitra ( Jesoa) nafafy vao afaka miasa ny FM araky ny parabole du semeur
rhaj0 - 26/03/2020 14:27
RBNIR Aleo tsy iadiankevitra fa avadiko kely indray ary e,
Tena giravy ny fahateren-tsainan'le RBNIR 'ty..
Ny olona h@ ankizy izao efa miezaka ny mifanalavitra 2 metatra, koa ry RBNIR mbola mirediredy @ izao petra-tanan-Jesosy izao ihany, miaraka amina imazination-na zazabelelo mino fa raha mikimpy mafy izy dia hisy mirakla hitranga eo.
Ho anareo Kristiana (sasany toa Gasy1zay) izay mino an'i Trump ho irak'Andrmntra, dia inty indray tsakotsakoy aho
Selon un des épidémiologistes, l’idée de Donald Trump de remplir les églises américaines à l’occasion de la fête de Pâques et d’encourager une bonne partie de la population à retourner au travail représenterait une «erreur aux propos épiques».
Tena fanetry be an'izao tontolo iao mihintsy ity fi(s)ainana Kristiana fanatika ity.
Mba afaka miteny manitsy resaka kely ve ny Kristiana mazava saina eto, fa dia tena giravy ny rediredin'ireto fanatika? Manala baraka ny Kristianisma.
gasy1zay - 26/03/2020 14:42
ka izy aloha no lany dia izy no maka fanampahankevitra ka rehefa matahotra i rhaj0 dia aza mifanerasera @ ireo kristiana namonjy fiangonana fa tsotra anie zany e!
rhaj0 - 26/03/2020 15:50
Izany ve no mba fisainanareo ry Gasy1zay .. mba aty @ tany mandroso ihany no mipetraka nefany..
TSY izaho anie no "matahotra" ee.. ny ahy ny system immunitaire-ko atokisako. Vao omaly aho izao nikohakohaka fa tsy maninona. T@ herinandro aho narary tenda fa tsy maninona. Fa mihatakataka @ fainakaviako sy ny namako aho. Ary ny @ Coronavirus, dia fantatro fa eo @ 85 h@ 90% dia sitrana raha voany.
Fa ny zava-dehibe, dia ny mitsinjo ireo marefo ara-pahasalammana mba tsy ifindrafindran'ilay Virus. Satria ireo dia ilay 5% izay ho faty raha voany.
TEna mbola TSY takatrao mihintsy ve izany h@ izao ry Gasy1zay??
Dia tena nilaozanao nihevoka boky tonta tao tokoany izany an.. ary dia tsy mba manara-baovao tahak'izay olona izany 'le Gasy1zay an...
Dia tena henatra ho anao sy izay FM izay mitarika anao ao izao ry Gasy1zay.
gasy1zay - 26/03/2020 16:58
raha mijery vaovao ve rhaj0 dia mahasakana an'i Trump hanokatra fiangonana @ paska? Jereo tsara fa tsy ny fiangonana ihany no tiany vahana fa hoe ajanona ny confinement fa manimba ekonomia hono, maninona tsy izay no kianin'i rhaj0 fa ny fiangonana paska ihany?
rhaj0 - 26/03/2020 19:22
RAha ny @ ekonomia an'i Trump, dia manan-kambara hanakiana tokoany aho, ary ho lavabe raha ho atao (efa natsipiko atsy @ ilay bilaogiko raha liana i Gasy1zay). Na ny tontolo iainana na ny soatoavina koa.
Fa finoana/fivavahana moa ny resak'eto.
Ilay fanakianana ry Gasy1zay dia noho ny resaka fahasalamana. Mba olona ny tena ary dia mihetsi-po @ marefo ara-pahasalamana, fa zareo ireo raha voan'ny Coronavirus dia mety ho faty.
Na ny hanaovana ny Lalao Olimpika koa dia TSY tokony atao mba hitsinjovana ireo marefo ara-pahasalamana, fa zareo ireo raha voan'ny Coronavirus dia mety ho faty
Tena mila averimberina io ambara-piditr'io ao an-tsain'ilay gasy iray izay izay voapempon'ny finoany giravy ao.
Dia ny ho atao avy @ ilay "mijery vaovao" angaha moa dia natao "hanakana" inona eo koa re ry Gasy1zay? Tena mbo sampona mihintsy nareo.
Ny mijery vaovao dia mba fitia te-ahalala sy fitia te-andalina re ry Gasy1zay aaa.. dia mba mazava ary mba afaka m(if)anazava ny fandehany (@ Ankizy).
Fa ny anareo Kristiana (sasany) moa, dia izao "vaovao mahafaly" izao ihany ary izay foana no maha-dangidangy anareo ao, ary dia hotry ny TSY takatrareo mihintsy izany ilay "fitia te-ahalala sy te-andalina" (scientific curiosity)
gasy1zay - 26/03/2020 19:50
tena te-ahalala sy te andalina tokoa ve i rhaj0? nga tsy efa hoe tsy hisy fantatra fa ny zanaka any aoriana no hahalala?
rhaj0 - 26/03/2020 20:35
Dia arak'iliay lojikan'i Gasy1zay, dia rehefa mihatra @ zanaka koa ilay izy, dia ny kaonty farany izany dia TSISY te-ahalala sy te-andalina mihintsy.. ntss... koa raha tsy Kristiana kouh..
Ny an'ny Kristiana mantsy, dia ireo t@ l'an-zero no tompon'ny fahalalana sy fandalinana, fa ny aty aoriana rehetra dia ONDRY daholo.